Apple nokuzvidira inovhara ese Apple Stores muFrance | IPhone nhau
Kubva nemusi weMuvhuro wadarika, Apple yakafunga kuvhara zvitoro zvayo zvese zvavakaparadzira munyika yakavakidzana, iko kuzvipira kuvhara uko iyo Cupertino-based kambani inoda dzivirira zvitoro zvako kubva pakuva tarisiro yekupararira yekoronavirus mune rave wave rechitatu wave wecoronavirus munyika.
Zvimwe zvitoro zvekufananidzira zviri mukati meguta zvakaramba zvakavhurika mumwedzi yapfuura, zvisinei, vese avo vari munzvimbo dzekutengesa vakavharwa kubva muna Ndira apfuura. Kubva nemusi weMuvhuro wadarika, hurumende yeFrance yakagadzika nguva itsva yekuenda kumba kubva pa7 masikati kusvika 6 mangwanani.
Kunze kwemaawa ekudzoka kumba, munhu wese anofanirwa kugara mukati memakiromita gumi kubva pamba pavo kunze kwe:
Enda kubasa, nzvimbo yekudzidza - kudzidziswa kana kuita nzendo dzisingatenderi kumbomiswa.
Enda kunzvimbo dzekurapa dzisingagone kuitwa kure.
Rubatsiro kuvanhu vanotambura, vanhu vari mumamiriro asina dziviriro kana kuchengetwa kwevana.
Ita zvakakosha kutenga.
Enda kune kana kudzokera kunzvimbo dzekunamatira, maraibhurari.
Maitiro ekutonga kana ekutonga.
Nekuda kwekuita kweApple Chitoro, kutengeswa kwezvigadzirwa zvemakomputa uye neshure-rekutengesa sevhisi, Apple inogona kuchengeta zvitoro zvakavhurika muFrance pasina dambudziko, asi sekureva kweveMacGeneration vakomana, iyo kambani yasarudza kukanganisa parutivi rwekuchenjerera uye kuvhara chaiko zvitoro zvese kusvika parizvino zvichiri kuvhurwa uye zviri mumaguta nzvimbo senge pakati peParis, Bordeaux, Lille ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple nokuzvidira inovhara ese Apple Stores muFrance
'Apple Tsigiro' inoita kuti zvive nyore kuona garandi uye kufukidza zvigadzirwa zvedu
LG inotangisa mutsara mutsva wemabhodhi nerutsigiro rweAirPlay 2